आमामा!!!१६ जना केटालाई माया जालमा फसाएर अन्तिममा यी युवतीले जे गरिन युवकहरुको भयो बेहाल…. – News Nepali Dainik
आमामा!!!१६ जना केटालाई माया जालमा फसाएर अन्तिममा यी युवतीले जे गरिन युवकहरुको भयो बेहाल….
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७ समय: १३:०५:४५
२७ वर्षीया सयाली काले नाम गरेकी एक युवतीले डेटिंग एपको माध्यमबाट १६ जना केटाहरुसंग प्रेम गरेकी छन् । उनी भारतको पुणेमा पर्ने पिंपरी चिंचवड इलाकामा बस्दै आएकी छन् । उनी शिक्षित युवती हुन् । उनको रामै्र जागिर पनि थियो । तर कोरोना महामारीको कारण उनको जागिर गएपछि उनले रोजीरोटीकोलागी यस्तो बाटो रोज्न पुगेकी हुन् । आफ्नो गुजारा चलाउनकोलागी उनले डेटिंग एपको माध्यमबाट केटाहरुसंग प्रेम गर्दै पैसा असुल्दै उनले आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आईन् । तर यो उनको तरिका गलत भएको हुनाले यतिबेला भने उनी जेलमा छिन् ।
Last Updated on: February 6th, 2021 at 1:05 pm
२०६ पटक हेरिएको